Wararka Maanta: Khamiis, Jan 7 , 2021-Haweeney ku dhimatay weerar taageerayaasha Donald Trump ku qadeen xarunta Capitol Hill
Muuqaallo laga duubay goobta ayaa muujiyay, dad badan oo watay calanka Trump qaar daaqadaha xarunta jebinaya kaddibna ka dusaya, qaarkood ayaa hoolka sawirro ku galayay, halka kuwo kalana ay ku qeylinayeen Trump ha joogo.
Dhacadadan waxaa siweyn u cambaareeyay madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa arrintaasi si xooggan ugu eedeeyay Donald Trump, isagoo sheegay in inkastoo ay ceeb u soo jiideen Mareykanka, haddana aysan ahayn kuwo kedis ahaa. Sidoo kale xubno ka tirsan Jamhuuriga ayaa cambaareeyay arrintaas.
Fadhigga mudanayaasha ayaa dib u bilaawday iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in laga yaabo in awooda laga xayuubiyo Trump oo sikumeel gaar ah loogu wareejiyo ku xigeenkiisa Mike Pence.
Mike Gallagher oo Jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in wixii shalay dhacay ay ahaayeen wax laga habboonaa. Sanatarka Ben Sasse ayaa isaguna sheegay in beentu ay cuqubo leedahay isla markaana qalalaasuhu uu ahaa mid aan laga baaqsan karin. Dhanka kalena, haweeneydii afhayeenka u ahayd Melania Trump, Stephanie Grisham, ayaa iyaduna is casishay.
Sidoo kale hoggaamiyaasha caalamka ayaa intooda badan ayaa la yaab iyo walaac ka muujiyay wixii shalay ka dhacay Mareykanka. Xoghayaha guud ee QM Antonio Guterres ayaa ku baaqay in la tixgeliyo hannaanka dimuqraadiyadeed. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa weerarkii lagu qaaday Capitol Hill ku tilmaamay inay ahayd wax aan Mareykanka lagu aqoon.